सयौँ वर्षपछि यो साउनमा परेको छ अद्भूत संयोग, कुन राशिलाई कस्तो ? – Naya Kura Daily
July 19, 2020 172
ज्योतिषहरुका अनुसार सयौँ वर्षपछि श्रावणमा अद्भुत संयोग बनेको छ । श्रावण महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछि ४ वटा ग्रहको वक्र योग परेको छ ।श्रावण महिनामा योपटक गुरु, शनि, राहु तथा केतुको बक्र परेको छ । अर्थात यी ग्रहहरुको चाल उल्टो हुनेछ।सिंह र कुम्भ राशि भएकाहरुलाई यो संयोग सबैभन्दा शुभ रहनेछ ।
५ सय ५८ वर्ष पहिला अर्था १४६२ मा यस्तै संयोग बनेको थियो । यसको प्रभाव श्रावण महिनाभरी रहने छ ।ज्योतिषाचार्य पण्डित मनिष शर्माका अनुसार गुरु, शनि, राहु तथा केतु चार ग्रह एक साथ बक्र रहेछन् ।
५५८ वर्ष पहिला पनि गुरु शनि राहु केतु एक साथ श्रावण महिनामा आएका थिए । त्यस समय गुरु स्वयंको राशि धनुमा वक्र, शनि आफ्नो राशि मकरमा वक्र, राहुन मिथुनमा र केतु धनू राशीमा बक्र भएको थियो । हेर्नुहोस् भिडियो
यो पनि – यी ४ राशिका हुन्छन् सबै भन्दा धेरै दुश्मन ! कतै तपाई पो पर्नुभयो की ?
एजेन्सी- जन्म समय अनुसार हरेक मानिसहरुलाई ज्योतिषशास्त्रले १२ वटा राशिमा विभाजित गरेको छ। जन्मसमयमा हुने ग्रह र नक्षत्रको स्थिति हेरेर राशि निर्धारण गर्नेगरिन्छ। १२ वटा राशिको फरक-फरक भाग्य हुने मात्र नभई व्यवहार समेत फरक-फरक हुन्छ।
मित्र मात्र होइन दुश्मन पनि हरेक व्यक्तिको हुन्छ। फरक यति हो की केहिका धेरै दुश्मन हुन्छन् भने केहिका कम। ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मान्ने हो भने निम्न ४ राशि हुनेहरुको सबै भन्दा धेरै दुश्मन हुन्छन्।प्राय भाग्यले साथ दिने यस राशि हुनेहरु सजिलै प्रगति गर्छन्। त्यति मात्र नभई सफल हुनको लागि दुखै गर्न पनि पछि हट्दैनन्। अलग सोच र प्रतिभाको कारण मेष राशि हुनेहरुलाई रिस गर्ने धेरै हुन्छन्। मेष राशि हुनेहरुले सफलतामा बाधा उत्पन्न गराउन खोज्ने देखि प्राय सचेत रहनु पर्ने हुन्छ।
कर्कट राशिव्यवहारको कुरा गर्नुपर्दा कर्कट राशि हुनेहरु खुला दिलका हुन्छन्। मनमा लागेको कुरा मनमै लुकाउने भन्दा पनि फ्याट्ट भन्ने यिन्को बानि हुन्छ। यहि बानिको कारण कर्कट राशि हुनेहरुको धेरै दुश्मन हुन्छन्। यति मात्र नभई केहि मात्रामा रिसाहा हुनाले पनि कर्कट राशि हुनेहरुले छिट्टै दुश्मन कमाउँछन्।
मकर राजस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नझुक्ने प्रवृतिको कारण यस राशि हुनेहरु हत्त-पत्त झुक्दैनन्। यहि कारणले गर्दै मकर राशि हुनेहरुका पनि धेरै दुश्मन हुन्छन्। कतै गलत भएको देख्न नसक्ने हुँदा पनि मकर राशिका दुश्मन धेरै हुन्छन्। तर मकर राशि हुनेहरु दुश्मनीको कारण विचल्लित भने कहिले पनि हुँदैनन्।
वृश्चिक राबोल्ने काममा अनियन्त्रित मानिने वृश्चिक राशि हुनेहरु परिस्थितिको विचार गर्दैनन्। यहि कारणले गर्दा वृश्चिक राशि हुनेहरुको धेरै दुश्मन हुन्छन्। त्यति मात्र नभई कहिले काहीं अरुलाई दबाउन खोज्ने बानिको कारण पनि वृश्चिक राशि हुनेहरुका धेरै दुश्मन हुन्छन्।
Prevआजबाट लगातार पाँच दिन देशभर वर्षाको सम्भावना, बाढी तथा डुबानको सम्भावना
Nextलकडाउन : यता पनि आन्दोलन, उता पनि आन्दोलन
अमेरिकाको उटाहमा शहरको बस्ती क्षेत्रमा विमान दुर्घटना
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्न नलिनीले गरिन् आ’त्मह’त्याको प्रयास, यसरी बाहिर आयो घटना
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित
यी किशोरलाई बाँदर भनेर ढुंगाले हिर्काउँदा मन कति दुख्दो हो ?